Guddoomiyaha Komishanka Togdheer Oo Beeniyay In Goobo cod-bixineed la laalay | Somaliland.Org
Guddoomiyaha Komishanka Togdheer Oo Beeniyay In Goobo cod-bixineed la laalay
November 8, 2012	Burco (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha guddiga Komishanka doorashooyinka gobolka Togdheer Cabdirisaaq Maxamuud Guud-cade (Arlab) ayaa beeniyay warar xaasaasi ah oo maalmihii u danbeeyay hadheeyay magaalada Burco iyo guud’ahaan gobolka Togdheer oo lagu qoray Saxaafadda.
Wararkan oo sheegaayay in gudiga guud ee Komishanka Qaranku ay laaleen Sanaaduuq farabadan oo la dhigi-jiray tuulooyinka koonfurta , galbeedka , waqooyiga Burco iyo waliba deegaanka Oodweyne kuwaasi oo buuq iyo xiisad horleh ka abuuray dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco iyo gudiga doorashooyinka .
Sidoo kale Guddoomiyaha Komishanka Togdheer oo u waramay Wariyaha Geeska Afrika ee gobolada bari Mahad Faarax Cabdilaahi oo xafiiskiisa Burco ku booqday ayaa ugu baaqay masuuliyiinta Xukuumadda ee degmooyinka gobolka Togdheer in aaney u ololaynin axsaabta Qaranka iyo ururada siyaasada .
“ Buuqaasi wuu jiraa ,laakiin sanduuq la kordhiyay iyo sanduuq la dhimay mid-na ma jiro Komishanka qarankuna dadka way fududeeyeen kayuugii dheeraa imikana sanduuq la dhimay ma jiro habayaraatee goob-walina sanduuqeedii hore way leedahay wax laga qaadayna ma jiraan markaa waxaan leeyahay dadku waxa ay ogyihiin ee macquulka ah sidooda hawga hadlaan laakiin wixii aan jirin yaaney ku hawlgalin ee hayska jiraan “ Sidaasi ayuu yidhi Mr Arlab .
Sidoo kale Guddoomiyaha oo fariin u diray masuuliyiinta Dawladda ee gobolka Togdheer ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa “ Waxa jirta ururo cabanaaya oo ka soo cabanaya masuuliyiin Dawladda ka tirsan oo kaambaynka ku jira oo cid u ololayna markaa waxaanu leenahay iyadoo ay gudigii anshaxuna joogaan ee gobolku, arinkaas ka taxadira ,wixii shaqaale dawladeed ahina yaanay ololaha ka qaybgalin “ Sidaasi ayuu hadalkiisa kaga baxay Guddoomiyuhu.
Geesta kale tan iyo maalintii ay soo baxeen wararkan sheegaya in tirooyin ka mid ah sanaaduuqda codbixinta gobolka Togdheer Komishanku joojiyay iyadoo ay awal hore-ba goobaha codbixintu ku yaraayeen ayaa waxa magaalada Burco hadheeyay shirar xaasaasi ah ay hormuudka iyo waxgaradka beelaha galbeedka Burco ay ay arintan kaga tashanayaan , waxa la filayaa maalmaha soo socda in ay baaqyo waaweyn oo isdaba joogi ka soo baxaan .
Xiisada ka dhalatay arintan Komishanku ku kaceen oo marka Togdheer laga tago gobolka Sanaag-na ka taagan ayaa ku soo beegantay xili axsaabta Qaranka iyo ururadda siyaasadu ku jiraan ololihii doorashadda golaha deegaanka Somaliland isla markaana gudiga Komishanka looga fadhiyay in ay cadaaladii lagu yiqiinay laban-laabaan ,si ay dalka iyo dadka taariikh wacan ugu horseedaan .
Previous PostKomishanka Oo Madaxweynaha Ka dalbaday inuu Talaabo ka qaado masuuliyiin ku milmay Ololaha DoorashaddaNext PostBooboow waa laguu dul-qaadanayaaye’e dadka ha caayin,qoraalkaagana khaladka ka buuxa eeg	Blog